သတင်းစုံ – Page 670 – မြန်မာပြည်သတင်းစုံ
ဘုရားဂုဏ်တော် ပွားများခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် နေ့စဉ်နေ့စဉ် ဘုရားဂုဏ်တော်(၉)ပါးကို ပွားများရတယ်။ အဲဒီလို ဘုရားဂုဏ်တော်တွေ ပွားများရင် ဘုရားဓာတ်တွေ တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ် ဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းလာတယ်။ အဲဒီလိုဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းတော့ ဘုရားရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုး အာနုဘော်တွေလည်း တဖြည်းဖြည်းကူးလာတယ် . . . ဘုန်းဘုန်းတို့ နှစ်သစ်အချိန်အခါက ကာလ တစ်နှစ်ပြောင်းသွားတော့ သိပ္ပံနည်းအရ နေက ဟိုးဒက္ခိဏအရပ်ကနေ တဖြည်းဖြည်း ရပ်ပြီးတော့ ဒီဘက်ပြန်ပြောင်းလာတာကို နှစ်သစ်လို့ခေါ်တာပေါ့။ ကမ္ဘာကြီးက နေကို ပတ်လှည့်နေတာ။ အဲဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ Read more
ဂျူဗင်တပ်နဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ရဲ့ ချိတ်ဆက်မှု ရရှိ နေကြောင်း ၊၊ သူ့ရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖွင့်ဟသွားတဲ့ #ရာဘီယော့
ဂျူဗင်တပ်နဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ရဲ့ ချိတ်ဆက်မှု ရရှိ နေကြောင်း ၊၊ သူ့ရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖွင့်ဟသွားတဲ့ #ရာဘီယော့ PSG နဲ့ ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် ကစားသမား ဖြစ်တဲ့ အက်ဒရီယန် ရာဘီယော့ က သူဟာ အပြောင်းအရွှေ့ နဲ့ ပတ်သက် လို့ 2019 – 20 ဘောလုံး ရာသီ အတွင်း ဥရောပ ထိပ်သီး ကလပ် နှစ်သင်း အကြား ဆုံးဖြတ်ချက် တွေ ချမှတ် Read more
နှင်းဆီနီအရွက် လျှို့ဝှက်ချက်၊ ဝဲနှင်းခူအစိုနှင့် ပွေးအတွက်
နှင်းဆီနီအရွက် လျှို့ဝှက်ချက်၊ ဝဲနှင်းခူအစိုနှင့် ပွေးအတွက် (Zawgyi) နှင်းဆီနီအရွက် လျှို့ဝှက်ချက် ဝဲနှင်းခူအစိုနှင့် ပွေးအတွက် ဆေးနည်းစုံပြီး မပျောက်ကင်းလျှင် စမ်းကြည့်ပါ။ နှင်းဆီအနှီအရွက်ကို နေလှန်းပါ။ တခြာနှင်းဆီထက် နှင်းဆီအနီက ပိုစွမ်းသည်။ -နေလှန်း၍ ခြောက်သွေ့လျှင် ပြာချပါ။ -ထိုပြာအား အုန်းခွံအဆီနှင့်ဖျော်ပါ။ (အုန်းသီးအခွံကို မီးရှို့၍ ထွက်လာသည့်အဆီ) -ထိုသို့ဖျော်ပြီးလျှင် အနာကိုလိမ်းပေးပါ။ အလျှင်အမြန် ပျောက်စေသည့် ဆေးစွမ်းပါ။ နက္ခတ္တရောင်ခြည် မြန်မာ့ဆေးစွမ်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးမြီးတိုများ Credit-Sai Min Thant နှင်းဆီနီအရွက် လျှို့ဝှက်ချက် ဝဲနှင်းခူအစိုနှင့် ပွေးအတွက် Read more
သင့်အသည်းကို သန့်ရှင်းစေတဲ့ သဘာဝ ဆေးတဖုံ
သင့်အသည်းကို သန့်ရှင်းစေတဲ့ သဘာဝ ဆေးတဖုံ (Zawgyi) သင့် အသည်းကို သန့်ရှင်းစေတဲ့ သဘာဝ ဆေးတဖုံ နေ့စဉ် စားသုံးတဲ့ အစားအသောက်တွေထဲမှာ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေတဲ့ ဓာတ်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ အဲဒီအဆိပ်အတောက်တွေကို သင့်ရဲ့ အသည်းက ဖယ်ရှားပေးတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အသည်း အားကောင်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သင့် အသည်း သန့်ရှင်းနုပျိုစေဖို့ သဘာဝ ဆေးတဖုံအကြောင်း ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုး စသဖြင့် ပိုးတွေဟာ အသည်း ထိခိုက်အားနည်းနေမှ တွယ်လို့ရတာပါ။ Read more
မျှစ်နှင့်ကျန်းမာရေး (Zawgyi) မျှစ်ကို ကြိုက်လို့သာစားနေတယ်…ဒါလောက်အလွန်ထူးခြားတဲ့ စွမ်းပကားတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ခုမှ သိတော့တယ်…. ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။ မြန်မာ လူမျိုးတွေက မျှစ်ကို ကြော်ချက်ပြီး ဟင်းလျာ အမျိုးမျိုး ပြုလုပ် စားသောက် တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မျှစ်တွေကို ဆေးဆိုးထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းထွက်လာပြီးနောက်မှာ မျှစ်ကို စားဖို့ လက်တွန့်သွားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးမဆိုးထားတဲ့ မျှစ်တွေကို ရွေးချယ် စားသောက်ဖို့ အကြံပြုရင်း မျှစ်ကြောင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး စွမ်းပကားတွေကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ (၁) အစာခြေစနစ်ကျန်းမာ ခြင်းမျှစ်ဟာ Read more
သမီးလေးတွေကျောင်းဆင်းချိန်ကိုကြည့်ပြီး သူနဲ့တူလို့ အရမ်းကိုသဘောကျနေတဲ့ လင်းလင်း နိုင်ငံကျော် သရုပ်ဆောင်နှင့်အဆိုတော် လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေ တို့ မောင်နှံနှစ်ဦးက အားပေးသူပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့ အချိန်ကြာကြာ ရပ်တည်နေနိုင်သူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ မောင်နှံနှစ်ဦးကတော့ သူတို့ချစ်တဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေရင်း သူမရဲ့ မိသားစုလေးကို သာယာလှပအောင် တည်ဆောက်နေသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုဘဝလေးကို သာယာလှပအောင် တည်ဆောက်ထားကြတဲ့ သူတို့ မောင်နှံနှစ်ဦးကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ (၂) နှစ်အရွယ် အမွှာသမီးလေး နှစ်ယောက်ကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားရှိခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေရဲ့ သမီးလေးနှစ်ယောက်ကလဲ တစ်နေ့တစ်ခြား Read more
ဝါသနာအရ ဆော့မိသွားပြန်ပြီဆိုတဲ့ လုလုအောင်ရဲ့ အမိုက်စား TikTok ဗီဒီယို
ဝါသနာအရ ဆော့မိသွားပြန်ပြီဆိုတဲ့ လုလုအောင်ရဲ့ အမိုက်စား TikTok ဗီဒီယို ပရိသတ်တွေကို အမိုက်စား ပုံရိပ်ကလေးတွေနဲ့ ဖမ်းစားထားတဲ့ photo model လုလုအောင် ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ စွဲမက်ဖွယ်ကောက်ကြောင်းအလှကလည်း ပုရိသတွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ Photo Model လုလုအောင် က TikTok ဆော့လွန်းလို့ သူမကို သမီးလေးက တော်တော်ကြည့်မရ ဖြစ်နေပြီဆိုပေမယ့်လည်း ဒီနေ့မှာ ထပ်ဆော့ဖြစ်တဲ့ သူမရဲ့ TikTok video file လေးကို Read more
မှော်ဆရာတစ်ယောက်လို စူးရှတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ တွေ့ရတဲ့ အောင်မြင့်မြတ်ရဲ့ ပုံရိပ်များ
မှော်ဆရာတစ်ယောက်လို စူးရှတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ တွေ့ရတဲ့ အောင်မြင့်မြတ်ရဲ့ ပုံရိပ်များ နိုင်ငံကျော် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အောင်မြင့်မြတ်က သရုပ်ဆောင်ကောင်းပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်အပေါ် စိတ်နစ်သရုပ်ဆောင်တတ်တာကြောင့် ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားသူ တစ်ဦးပါ။ ယောကျာ်းဆန်ပြီး စူးရှတဲ့ အကြည့်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အောင်မြင့်မြတ်က မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေသာမက ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးခြင်းကိုပါ ရရှိထားသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အားပေးသူပရိသတ် အခိုင်အမာနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ အောင်မြင့်မြတ်က လက်ရှိမှာလည်း အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်ကိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင့်မြတ်က ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေသလို ဓာတ်ပုံတွေလည်း အမြောက်အများ ရိုက်ကူးပေးနေတာပဲ Read more
ပန်းပွင့်ကြီးနဲ့အပြိုင် လှသွေးကြွယ်နေတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်းရဲ့ ပုံရိပ်များ
ပန်းပွင့်ကြီးနဲ့အပြိုင် လှသွေးကြွယ်နေတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်းရဲ့ ပုံရိပ်များ မအေးသောင်းလို့ ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်းကတော့ အပျိုကြီးဆိုတဲ့ဂုဏ်ကို ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဆဲပါ။ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ အလှမ်းဝေးခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာမှ ဇာတ်လမ်းတွဲနှင့် ကြော်ငြာတွေရိုက်ကူးပြီး အနုပညာလောကထဲသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးက သူမရဲ့ စွဲဆောင်မှုတစ်ခုပါ။ အဲ့စွဲဆောင်မှုလေးတွေကြောင့် ကိုကိုတွေ မောင်မောင်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားလှသူလေးတစ်ဦးပါ။ အမြဲတမ်း မြန်မာဆန်ဆန်နဲ့ ကျက်သရေရှိရှိလှပတဲ့ မအေးသောင်းရဲ့ ပုံရိပ်တွေကလည်း ပရိသတ်တွေကြားမှာ အမြဲတမ်း ရေပန်းစားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခောက်မှာလည်း မိုမိုလေးပရိသတ်တွေအတွက် မအေးသောင်းရဲ့ လှပတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို Read more
တရုတ်မီးရထားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းသို့အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သိန်းလှူဒါန်း Zawgyicodeဖြင့်ဖတ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရပ်ဝန်းနှင့် လမ်းအစီအစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်း ရထားလမ်းတည်ဆောက်ရေးအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေစမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်နေသော တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ကုမ္ပဏီနှင့် ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတခုတို့သည် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တည်ထောင်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး လှုံဆော်သည့် ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းသို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သိန်း လှူဒါန်းသည်။ကုမ္ပဏီနှစ်ခုက ကွယ်လွန်သူ မိခင်အမည်ကို အစွဲပြုခေါ်ဝေါ်သည့် ဒေါ်ခင်ကြည်ဖေါင်ဒေးရှင်းသို့ လှူဒါန်းသည့် ထိုအခမ်းအနားကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအလှူငွေကို နေပြည်တော်ရှိ ဥယာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးရေသင်တန်းကျောင်းအတွက် အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ရန်ကုန်ရှိ Read more
Previous 1 … 669 670 671 … 697 Next